P2P Bitcoin Exchange Paxful Shuts Down Venezuela Operations to Comply With US Sanctions – BitcoinEthereumNews.com
The North American exchange claims the decision “comes with great disappointment”, but had to insulate against potential punitive outcomes on its worldwide operations. It ကိုးကား strict regulations from the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). The spokesperson explained:
Matt Ahlborg, the creator of crypto analytics firm Useful Tulips, said U.S. sanctions against any country should accelerate bitcoin adoption. He Tweet: “US compliance burdens equate to the idea that it is ‘better to blockamillion good users than let one bad user in!’ This is why we Bitcoin.”
ရသည်မှာ, ဒေတာ from Useful Tulips shows that business was thin for Paxful in Venezuela. Over the past seven days, just about $25,000 worth of BTC exchanged hands on the platform, compared to $4.5 million traded on rival Localbitcoins in the same country.
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
Tags: Bitcoin, လိုက်နာ, လဲလှယ်, စစ်ဆင်ရေး, P2P, Paxful, ပိတ်ဆို့မှုများ, ပိ, ဗင်နီဇွဲလား
ဂျပန်အခြေစိုက် Fisco မှ Bitcoins များခဝါချမှုအတွက် Binance ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်